Myanmar Fire Services Department | Ministry of Home Affairs
In accordance with the historical evidences, 663 firemen were appointed to perform the fire prevention measures in Bagan under the rule of King Anawrahta (AD 1044-1077). Also there were some evidences that orders for fire prevention were issued to carry out the measures under the rules of ancient Myanmar Kings.
The first Yangon Municipal fire brigade was organized in 1885. In 1932, voluntary fire brigade was formed as Yangon municipal act and organized the fire brigade with 21 staffs including fire chief with the aim of conducting fire prevention measures under the order of the education and regional administration department on 3rd February 1947. Fire personnel Act no.(6) was acted on 28 March 1952 and fire brigade was organized with the strength of 636 personnel under Ministry of Home Affairs. New Fire Service Law was acted in 1963.
Under the new government programme, the number of 448 staffs from other departments were transferred, so the quantity of the staffs was improved and it became the fire brigade which carry out 24 hours dutiesaday. Also the fire personnel has been got the chance to receive the ration money since 1 April 1980.
In December 1991, Myanmar FSD extended its organizational strength up to 2581 personnel under State Law and Order of Restoration Council and with the aim to perform the fire service activities widely, MFSD was changed its control from Ministry of Home Affairs and Religious Affairs to MSWRR. Central Fire Services Training School with 822 staffs was opened on 30 April 1998 under State Peace and development Council. To upgrade the fire station, MFSD got the permission to appoint the total strength of 7167 personnel in 2011.
Under the administration of the Republic of the Union of Myanmar, Myanmar Fire Services Department had been moved from Ministry of Social Welfare, Relife and Resettlement to Ministry of Home Affairs on 6th November 2011. Since February 2017, with the requirement of the MFSD, fire Safety activities have been carried out with the total strength of 24599 fire personnel which include 735 gazetted officers and 23864 other rank fire personnel.
Myanmar Fire Brigade Day (5-5-1946)
The 1st Voluntary Fire Union Conference (national level) was held at Zinat Islam woman hall in Kantawlay, Yangon on 5.5.1946 (Sunday) and 197 representatives from 19 districts across the country. The patrons were U Aung San, U Ba Cho, U Ba Gyan, Takhin Mya, U Ba Phay Gyi, U Soe Nyunt, Hintada U Mya, U Tin (New light of Myanmar), U Mya (Pyaw Bwe), Takhin Than Htun, U Ba Win, Bandoola U Sein and at the conference, Bogyoke Aung San madeaspeech about the fire services. From this conference, Myanmar Fire Brigade day has been Anniversity on5May every year.
MFSD isagovernment organization which is responsible to deal with disasters conducting fire fighting and search & rescue activities in Myanmar.
(1)	Fire precaution & fire prevention,
(2)	Fire extinction,
(3)	Search and rescue services,
(4)	Social humanitarian services.
The performances of the Fire Services Department are;
1.	To enhance the four abilities of fire personnel; fire fighting ability, search & rescue ability, administrative ability and organizational ability
2.	To maintain and upkeep the appliances and equipments of fire fighting and
search & rescue in the state of readiness
3.	To conduct the public fire safety awareness activities effectively
4.	To organize and train Auxiliary Fire Brigade and reserved Fire Brigade members
5.	To do continuous research and train the fire personnel in order to be proficient in the modernized techniques of administrative, fire fighting and rescue to keep abreast of the international community
6.	To make the state owned and private departments, organizations and enterprises follow the fire safety advices utilizing authorities empowered by fire service law
7.	To upgrade the capabilities of the Myanmar fire personnel providing trainings in order to be the firm reserved force of the State.
Myanmar Fire Brigade
Myanmar Fire Brigade is categorized by3types-
(a) government fire brigade
(b) auxiliary fire brigade
(c) reserved fire brigade (for factories, mills, and so on)
မီးသတ်သင်တန်းကြောင်း (ရန်ကုန်) သမိုင်းအကျဉ်း
မီးသတ်သင်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)ကို ၁၉၅၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ အမှတ်(၁၇၁)၊ အလုံလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ် (ယခု ပြည်သူ့ရင်ပြင်) တည်ရှိရာနေရာတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၈ ခုနှစ် အထိ ပြည်လမ်း နှင့်အလုံလမ်းထောင့်ရှိ သနက(၄)တပ်ရင်း (ယခုပြည်သူ့လွှတ်တော်) တည်ရှိရာနေရာတွင် ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အခြေခံမီးသတ်သင်တန်းအပတ်စဉ်(၁) မှ (၁၈)အထိ ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၄ ခုနှစ်အထိ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ နာဂလှိုဏ်ဂူ ကုန်းမြင့် (ယခု စွယ်တော်မြတ်စေတီ) တည်ထားကိုးကွယ်သည့်နေရာတွင် သင်တန်းကျောင်းပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အခြေခံမီးသတ်သင်တန်းကို အမှတ်စဉ် (၁၉) မှ (၉၂) အထိ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှစတင်၍ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ အုတ်ပုံဆိပ်လမ်းနှင့် စွယ်တော်မြတ် စေတီလမ်းထောင့်ရှိ ယခုနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး အခြေခံမီးသတ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၉၃)နှင့် (၉၄)အထိ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ မီးသတ်သင်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်)တွင် အောက်ပါသင်တန်းများအား သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေး လျှက်ရှိ ပါသည်-
(1)	Station Officer Course
(2)	Rescue Techniques Course
(3)	Swimming and Life Saving Course
(4)	Water Rescue Course
(5)	Internet and E-mail Course
(6)	Township Level Administrative Course
(7)	Station Level Administrative Course
(8)	Mechanic Course
(9)	Aircraft Fire Fighting and Rescue Course
(10)	Training of Trainer for Driving Course
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အုတ်ပုံဆိပ်လမ်းတွင် မီးသတ်သင်တန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းတည်းရှိသည့်အနေအထားမှ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ အထက် မြန်မာပြည်တွင် အဆင့်မြင့်မီးသတ်သင်တန်းနှင့် စစ်ပညာသင်တန်းများ သင်ကြားပို့ချရန် “အထက် မြန်မာပြည် အဆင့်မြင့်မီးသတ်သင်တန်းကျောင်း”ကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ ရေတံခွန်တောင်၊ ရှင်တော်ကုန်းရေကြည်ကွင်းအမှတ်(၅၀၇)၊ (၅၀၉)နှင့် (၅၄၈)ရှိ မြေဧက (၁၇၃.၃၁)မြေနေရာတွင် ၁၉၉ရခုနှစ်တွင် စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ဗဟိုမီးသတ် သင်တန်းကျောင်း (Central Fire Services Training School) ဟု ခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ ပါသည်။
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ၏ လမ်းညွှန်မှုအရ မြန်မာ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ သန္ဓေနှင့်အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား နိုင်ငံတော်၏ အရန်အင်အားများ အဖြစ် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်လေ့ကျင့်ပေးရန်နှင့် အဆင့်မြင့်မီးသတ်သင်တန်းများ သင်ကြားပို့ချ ပေးသွားရန် ရေတံခွန်တောင် ဗဟိုမီးသတ်သင်တန်းကျောင်းအား မန္တလေးတိုင်း၊ ပြင်ဦးလွင် မြို့နယ်၊မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင် ကားလမ်း၏ မြောက်ဘက်(၂.၃)မိုင်ခန့်အကွာ ဇီးပင်ကြီးကျေးရွာအနီး ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) နှင့် ရဲဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးဌာနတို့နှင့် နယ်နိမိတ်ခြင်း ဆက်စပ်လျက် မြေဧက (၁၆၇၁) ရှိ မြေနေရာတွင် ဗဟိုမီးသတ်သင်တန်းကျောင်းကို ၁၉၉၈-၁၉၉၉ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊မေလ (၁၆) ရက်နေ့ တွင် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူး (၁) ကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကာ သင်တန်းများကို စတင်သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပါသည်။
ဗဟိုမီးသတ်သင်တန်းကျောင်းကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ နှင့် အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေး၏ အရန်အင်အားအဖြစ် ဖွဲ့စည်း လေ့ကျင့်တာဝန်ပေးအပ်နိုင်ရန်အတွက်စစ်ပညာရပ်များလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ရန်နှင့် မီးသတ်ပညာ အခြေခံနှင့်အဆင့်မြင့်မီးသတ်ပညာရပ်များကို သင်ကြားပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပါသည်။
ဗဟိုမီးသတ်သင်တန်းကျောင်းတွင် အောက်ပါသင်တန်းများအားသင်ကြား လေ့ကျင့်ပေးလျှက် ရှိပါသည်-
(1)	Basic Fire Fighting Techniques Course
(2)	Refresher Course
(3)	Advanced Fire Fighting Techniques Course
(4)	Station Officer Course
(5)	Senior Officer Course
(6)	Rescue Techniques Course.
( ဇ)	အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း
( ဋ)	လက်ထောက်မီးသတ်ဦးစီးမှူးလောင်းသင်တန်း
( ဌ)	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးသင်တန်း